Global Voices teny Malagasy » Minisitry Ny Emira Arabo Mitambatra Miteny Amin’i Pakistana: “Mila Maka Safidy Mazava Ianareo Mikasika Ny Ady Ao Yemen, Raha Tsy Izany…” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Avrily 2015 4:05 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Emirà Arabo Mitambatra, Pakistana, Yemen, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka
“Sary mahafinaritra amin'ny sehatra ao Sana'a mandra-pahatonganao saina fa hay ireo ka fitaovam-piadiana famelezana fiaramanidina manondro ny lanitra. #Yemen” hoyny bitsik'ilay Yemenita bilaogera, @amelscript , izay mizaraity saripika ity ao amin'ny Twitter
Mitodika amin'i Pakistana ny mason'ny rehetra noho ny nandavany tsy handefa andian-tafika hanampy amin'ny ady tarihan'ny Saodiana ao Yemen.
Tao amin'ny Twitter, nanakiana an'i Pakistana ny Minisi-panjakana misahana ny Raharaham-bahiny ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, Dr Anwar Gargash, tamin'ny tsy nijoroany niaraka tamin'ireo Arabo ao amin'ny Golfa tamin'ny ora nilàna izany. Nolazaina fa amin'izao fotoana izay mahatsara ny fampiasam-bolan'ny Golfa any Pakistana izao, tsy manohana ireo firenena Arabo ao amin'ny Golfa ny Pakistane amin'ny ady ataony amin'i Yemen.
Nibitsika ho an'ireo mpanjohy azy miisa 120K izy :
Mifanipaka, mitera-doza ary tsy nampoizina ny fanapahankevitry ny parlemanta Pakistane izay ilazàny fa tsy momba ny atsy na ny aroa i Pakistana amin'ny fifandirana ao Yemen no sady milaza izy fa manohana an'i Arabia Saodita avy any Islamabad
Nolanian'ny parlemanta Pakistane tamin'ny Zoma fa tsy handray anjara amin'ny firotsahana ara-miaramila any Yemen ry zareo, fifandirana efa ho roatokom-bolana izao.
An-jatony no olona voalaza fa maty amin'ny ady atao any Yemen hatramin'ny 26 Martsa nanombohan'i Arabia Saodita ny firotsahana ara-miaramila tao amin'io firenena io . Tohanan'ireo mpiara-dia aminy ao amin'ny Golfa Persika, Ejipta, Jordania, Maraoka, Tiorkia ary Sodana, nanomboka fanafihana an'habakabaka i Arabia Saodita, nomeny anarana hoe Tafiotra tsy iadian-kevitra, hamelezana ireo mpiadin'ny Houthi izay naka ny fifehezana an'i Yemen tamin'ny Janoary.
Anaty bitsika iray hafa, miteny i Gargash hoe:
Anaty toe-draharaha mampidi-doza sy saropady ny Golfa Persika ary tandindonin-doza ny filaminana statejikany. Ny fotoana ahitana ny marina tahaka izao no ijerena izay tena mpiara-dia sy ireo milaza ho mpiara-dia fotsiny rehefa eny anaty fampahalalam-baovao sy fanambaràna samihafa
Manampy i Gargash, tao anaty bitsika iray mampahatahotra :
Takiana amin'i Pakistana ny handraisany mazava izay toerany mba ho an'ny tombontsoan'ny fifandraisana stratejikany amin'ireo fanjakana Arabo ao amin'ny Golfa. Ny fijoroana mifanohitra sy manjavozavo tahaka izany, ao anatin'ity olana mafàna ity, dia hisy fiantraikany goavana
Kanefa bitsika iray hafa no toa milaza an-kolaka fa mijoro miaraka amin'i Iran i Pakistana momba ny ady ao Yemen :
Toa nihoaran'ny lanja omen'i Islamabad sy Ankara an'i Iran ny lanja omeny ireo firenena ao amin'ny Golfa. Ilaina ny tohana ara-toekarena sy ny fampiasana vola ataontsika, saingy tsy eo ny fanohanana ara-politika avy amin-dry zareo rehefa tonga ny fotoana tena ilàna izany
Ary raha nanambara ny fanohanany ny ao ao Yemen i Ankara, Tiorkia kosa tsy nandray anjara mivantana tamin'ireo hetsika, nanolotra ireo fotodrafitrasany ho ampiasaina sy ny tohana amin'ny fanomezana vaovao fa tsy andian-tafika.
Na izany aza, marobe no tonga manohana ny fanapahankevitr'i Pakistana. Nibitsika ho an'ireo 77K mpanjohy azy ilay Ejiptiana , Ahmed Khalil :
Nandà tsy handray anjara amin'ny ady ao Yemen i Pakistana. Antenaintsika fa handà tsy handray anjara aminìilay ady ny miaramilantsika Ejiptiana. Atao hiaro ny sisintanintsika fotsiny ny miaramilantsika.
Kassim Hussain, Bahraini mpamoaka lahatsoratra an-gazety, dia miteny fa lasa “saro-bahana” ilay toe-draharaha :
Lavin'ny parlemanta ao Pakistana ny hanohana ny ady ao Yemen ary miantso ny tsy hombàna ny atsy na ny aroa izy sady manakana an'i Arabia Saodita tsy handefa ny fiaramanidiny hamakivaky ny habakabaka Pakistane. Miha-saro-bahàna izy ity.
Ary Fouad Ibrahim, miaraka amin'ireo 20.8K mpanjohy azy ao amin'ny Twitter, manontany tena hoe :
Nanomboka very saina ve ry zareo Al Saud ? Androany ry zareo manakana ny tsy hisidinana ny habakabaka Pakistane noho ny hoe “fiarovana ny filaminan'ny habakabaka” Dia ho voasazy i Pakistana noho ny fandavany tsy handray anjara amin'ilay ady.
Araka ny lazain'ny Pakistani daily Dawn , “nisy fiaramanidina Pakistane iray mpitondra mpandreha nosakanana tsy hiditra ny habakaban'i Arabia Saodita amin'ny Zoma, noho ny filazana fa tsy nanana ny antontan-taratasy ilaina ilay fiaramanidina.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/04/16/69235/
 26 Martsa nanombohan'i Arabia Saodita ny firotsahana ara-miaramila tao amin'io firenena io: https://mg.globalvoices.org https://globalvoicesonline.org/2015/03/26/breaking-saudi-arabia-wages-war-on-yemen/
 Pakistani daily Dawn: https://mg.globalvoices.org http://www.dawn.com/news/1175291/lahore-to-dammam-flight-prevented-from-landing-in-saudi-arabia-reports